Faa’iidooyinka Dabaasha iyo Badda Berbera Xog iyo tallooyinba | Qaran News
Faa’iidooyinka Dabaasha iyo Badda Berbera Xog iyo tallooyinba
Writen by Qaran News | 4:59 pm 9th Sep, 2017
Faa’iidooyinka Dabaasha iyo Berbera
Xog iyo tallooyinba: W/Q Farxaan Maxamed Sultan (Rakad)
Dabaashu waxay abuurtaa farxad, fir-fircooni iyo raaxo hurdo oo aad ka dib dareemi doontid.
Waxay ka hor tagtaa caajiska, waxaanay baabiisaa wer-werka. Xaga caafimaadka waxay sifaysaa indhaha, waxayna qor-qortaa oo qurxisaa qaabka qofka, iyadoo hoos u dhigta caloosha iyo buurnida xadka ah.
MAAMULKA SARRE EE Gobolka Saaxil waxay
Kala yihiin sidan :-
Jaamac Yuusuf Axmed Badhasaabka Gobolka
Maxamed Cisman X Axmed Badhasaab xigeen
C/shakur Maxamuud Xasan Maayarka Gobolka
Cabdikariin Aaden Siciid Xogayaha Gobolka
Magaalada Berbera waxa ku taala xeebta ugu dheer badda cas, waxaa kaloo Berbera ku taalla dekada ugu wayn Soomaalilaan, waxaanay leedahay taariikh qarniyo ah , waanna halka xadaarada soomaalidu ka bilaabantay, waxay kaloo leedahay taariikh guun ah oo soo jireen ah, Berberi waxay nasiib u yeelatay inay ku yaalaan Goobaha ugu uu dhaqaalaha soomaaliland ka soo baxo sida:-
Kastamka ugu balaadhan soomaalilaan
Warshada shamiitada (ma shaqayso)
Berberi waxay ka mid tahay xeebaha ugu dhaadheer ee ku yaala Soomaalilaan.
Waxaanna u dalxiis yimaada Dalxiisayaal fara badan oo ka yimaadda daafaha caalamka iyo meelkasta si ay ugu dalxiisaan taariikhna uga qoraan.
Badda Berberi waxay ka mid tahay khayraadka dabiiciga ah ee ay soomaalilaan ku faanto gacantanna ay ku hayso.
Soomaalilaan Waxay leedahay Xeebta ugu quruxda badan ee Batalaale, waxaana isugu yimaada dalxiisayaal kala duwan oo Dalkasta ka yimmaada.
Waa xeeb ay ku taalo bad marka aad dabaalanaysid aad dareemaysid:-
Dareen gaara oo ka duwan kaagii horre.
Magaalada Berbera Waxa ku yaalla goobo daĺxiisa iyo goobo qadiimi ah sida:-
Moofada Cilmi boodhari
Goobta kalluunka ee Fair fishta
Waxa ku yaala Huteelo cusub iyo kuwo horreba iyo goobo laga helayo adeegyo kala duwan:-
Shide yare Hotel
Xanaan Coffe and Restaurant
Batalaale Restaurant and Supermarket
Fadhi ku ceesha ‘Kalluun daray ah oo kaliya”
Yemeny al saciid
Barwaaqo Booshari ka ugu wayn.
Abby Hostital (Private)
Goobihii kubada cagta iyo kolaygaba.
Saldhigyo iyo ciidan heegan ah
Xarumaha ganacsi ee waaweyn Telesom iyo Dababshiil oo ku yaala goobo ku haboon.
Dalxiiska ugu balaadhan ee BERBERA loo yimaadaa waa badda baduna waxay u baahan tahay inaanad dhaafin inta aad taqaanid markastana aad taxadir gaara muujisid. Sidoo kale in aad dadka waydiisid inay kacsan tahay iyo in kale. Taxadir u gal dadkana ha ka fogaan.
Markasta oo dadku ku bataan badda waa markasta oo ay hanjabto waayo dadku markay ku bataan badda xumaan iyo dad si qaldan ugu dabaasha lagama waayo si dhaqan iyo diin leh u dabaalo carruurtana ka war hay oo dabaal sii.
Dharkii badda, sharaabkii iyo biyihii haddii aad awoodo soo qaado.
Maanta magaalada Berberi waxay la tartamaysaa magaalooyinka waaweyn waxaanad ka helaysaa adeegyo kala duwan oo casriya iyo waddooyin aad ku raaxeysatid kuna ilawdid waddoyinkii Hargeysa.
Farxan Maxamed (Rakad)